Banijya News | » ६६ वर्ष पहिल्यै लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चीनबीच सम्झौता ! ६६ वर्ष पहिल्यै लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चीनबीच सम्झौता ! – Banijya News
काठमाडौं, २८ कात्तिक । भारत र चीनबीच ६६ वर्षपहिल्यै नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई ट्रेड लिंक (व्यापारिक नाका) बनाउने सम्झौता भएको तथ्य बाहिर आएको छ। सरकारले गुपचुप राखेको सीमा विवादसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच दुईपक्षीय सम्झौता भएको उल्लेख छ।
यस्तै सन् २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच च्याङ्ला÷लिपुलेक नाकाबाट ‘सीमा व्यापार’ अघि बढाउने सहमति भएको थियो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।